pyLinuxWheel uye Oversteer: yakavhurwa sosi yekugadzirisa ako mutambo mavhiri | Linux Vakapindwa muropa
ari mavhiri ekufambisa ekutamba masimba ekudzora anopa hukuru chaihwo kana zvasvika pakutamba mitambo yekumhanya. Parizvino, nechikamu chiri kukura chemitambo yemavhidhiyo yeLinux nemazita anowanikwa seDiRT, Fomula 1 2017, Speed ​​Dreams, Grid Autosport uye vese avo vakaunzwa neWindows native Steam Play, mikana yakawanda.
Iwo madhiraivha erudzi urwu rwevatongi anoshandawo nemazvo muLinux, asi chero mugadziri achivapa zviri pamutemo uye handizvo mune zvimwe zviitiko zvakaita seLogitech. Asi kana iwe uchida kushandisa iyi mhando yemapepa usinganetseki nekushaikwa kwekutsigirwa, nhasi tinokuratidza maviri akavhurwa sosi mapurogiramu ayo achakubatsira iwe mukugadzirisa iwo mapepa. Imwe inonzi pyLinuxWheel yakanyorwa muPython uye imwe yacho ndeyeOststeer.
pyLinuxWheel iri pasi peGPL rezinesi uye iri inowirirana neDriving Force Pro, Driving Force GT, G25, G27 uye G29 kubva kuLogitech, akati wandei anozivikanwa mavhiri ekufambisa echimiro ichi. Iyo ine dudziro yeSpanish uye yakarongedzwa mune yepasirese AppImage package kuitira kuti iwe ugone kuiisa mune chero kugovera nekungoita mashoma mashoma. Kana iwe uchifarira, unogona kurodha pasi kubva kuGitLab peji kana pakava.io.
Uye kana iwe uchida chimwe chinhu chechimwe chinhu Imwe nzira Ku pyLinuxWheel, une Oversteer, zvakare ane rezinesi pasi peGPL. Mune ino kesi inoshanda nemavhiri akaita seDriving Force, Formula EX, Driving Force Pro, Driving Force GT, Momo Force, Momo Facing Force, Speed ​​Force Wireless, G25, G27, G29 uye G920 kubva kuLogitech. Rondedzero yakanaka yemapepa ayo aunogona kushandisa nekutenda kune iyi software, iyo iwe yaunogona zvakare kumisikidza iwo sezvaunoshuvira chaiwo mitambo. Uyezve, unogona kushandura zviri nyore pakati pezviruva uye kungofunganya nezve kutyaira uye kufara ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » pyLinuxWheel uye Oversteer: yakavhurwa sosi yekugadzirisa ako mutambo mavhiri